Xiaomi na-anwale mmetụta "mgbanwe igwe" na ngwa MIUI gallery | Gam akporosis
Xiaomi na-anwale mmetụta "mgbanwe igwe" na ngwa MIUI
Xiaomi na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ ahụ mgbe niile, ma ọ bụ n'ihi nchapu nke ngwaọrụ ya ndị ọzọ, mmelite MIUI ma ọ bụ nkwụsị nke atụmatụ ya.
Akụkọ banyere ụlọ ọrụ na-apụta, na nke kachasị ọhụrụ a ọrụ ọhụrụ nke ga-adị na ngwanrọ igwefoto nke ụdị Xiaomi ọzọ. Nke a ga-abata na MIUI 11.
Ndị mmepe XDA kwuru na ha achọpụtala, site na nyocha koodu, na Xiaomi na-emepe ihe ngosi foto ọzọ maka ekwentị ya ga-ekwe ka ndị ọrụ spoof "heaven" na iche iche presets. Mmetụta ọhụrụ a "ntụgharị igwe" ga-esonye dị ka akụkụ nke arụmọrụ ndozi foto n'ime ngwa MIUI Gallery.
Site na mmetụta a na - esote, ndị ọrụ nwere ike iji foto nwere oke igwe na - ewepu foto ma gbanwee ya site na usoro atọrọ dị iche iche na - agbanwe igwe n’elu ọnọdụ dị iche iche.
Presets agaghị agbanwe naanị ọdịdị igwema ha ga-agbakwunye mmetụta ọkụ dị mkpa na onyinyo ndị ọzọ na ihe iji kwekọọ na oge nke ụbọchị ma ọ bụ ọnọdụ ihu igwe nke igwe na-anọchi anya.
A ga-enwekwa a mmịfe ịchịkwa a ọkụ mmetụta. Enwere vidiyo nke arụmọrụ na arụ ọrụ, nke onye otu XDA biputere, Ugbokodo.
Xiaomi na-akwado ezigbo ụdị Xiaomi Mi 9: nke nwere ọla edo 24 karat!
Koodu ahụ kpughere na a ga-ebu ụzọ tinye nsonaazụ igwe na nke mbụ na-abịanụ akpọrọ 'raphael', 'davinci' na 'pyxis'. Anyị enweghị ike ikwu n’ezie ụdị ndị nwere aha koodu ndị a, mana ọ ga-abụrịrị ọtụtụ ndị akabeghị n’ahịa.
Site na nkwuputa ndị gara aga, "raphael" na "davinci" bụ ụdị Xiaomi na-esote na teknụzụ Snapdragon 855 na nhazi igwefoto gbapụta yana nyocha mkpịsị aka nyocha ihu na ngosipụta. Anyị nwere olile anya na otu n’ime ha bụ Mi Mix 4.
A na-ekwu na aha ahụ akpọrọ 'pyxis' bụ MIUI nke ụdị Xiaomi Android One ngwaọrụ (Mi A3), nke a na-enyo enyo na ọ ga-anọchi Mi 6X. Ngwaọrụ ahụ ga - enwe, n ’agbanyeghị ọnọdụ, igwefoto dị n'ihu nke megapixel 32 na pixel grouping innovation.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi na-anwale mmetụta "mgbanwe igwe" na ngwa MIUI
Samsung Internet, ga-agbakwunye njikwa ngosi ọhụụ